Ny fizahan-tany any Tel Aviv dia fety lehibe amin'ity herinandro ity miaraka amin'ny Eurovision
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Ny fizahan-tany any Tel Aviv dia fety lehibe amin'ity herinandro ity miaraka amin'ny Eurovision
Miroborobo ny fizahan-tany any Tel Aviv amin'ity herinandro ity miaraka amin'ny trano fandraisam-bahiny efa lany, ny mponina mipetraka amin'ny havany hanofa ny efitranony sy ny trano fonenany ho an'ny vidiny mirongatra - ary saika ny sanda rehetra no ekena. Tel Aviv any Israel dia fantatra fa toerana hanaovana fety, hankafizana ireo morontsiraka tsara indrindra sy sakafo tsara indrindra eran'izao tontolo izao, ary ankehitriny ny tanàna dia ivon'ny tontolon'ny mozika eropeana - Eurovision.
Mpizahatany maherin'ny 10,000 no ao Tel Aviv amin'ny fifaninanana hira Eurovision mitohy. Downtown Tel Aviv dia feno hipoka Eurovision. 7280 ny mpijery afaka miditra ao amin'ny Expo Tel Aviv sy ilay Pavilion 2 vaovao, izay kianja filalaovana ho an'ny Eurovision 2019.
Ny teny filamatra ho an'ny Eurovision 2019 dia Dare to Dream, ary ny teti-bidin'ny fifaninanana dia tombanana ho 28.5 tapitrisa €. Israel dia mandray ny fifaninanana Eurovision taorian'ny nandresen'ilay mpihira eto an-toerana Netta Barzilai tamin'ny taon-dasa. Ny firenena mandresy dia mpampiantrano amin'ny taona manaraka.
Ity seho ity no hetsika mozika mivantana lehibe indrindra eran'izao tontolo izao ary ankafizin'ny mpijery tanora kokoa. Nilaza i Eurovision tany amin'ny tsena 42, fa ny lalao 15-24 taona dia be mpitia indrindra noho ny fampisehoana antonony.
Ny fandraisana ny fahasamihafana dia fihetseham-po izay mihatra amin'ireo mpankafy LGBT, izay mandrafitra ampahany lehibe amin'ny vondrom-piarahamonina Eurovision.
Fotoana miavaka amin'ny tantara nandritra ny 64 taona ny fifaninanana dia ny fandresen'ny mpanjakavavy dragona Conchita tamin'ny 2014 sy Dana International, mpihira transgender, nandresy ho an'i Israel tamin'ny taona 1998 niaraka tamin'ny hirany Diva.
Tamin'ny taon-dasa, nahitana lehilahy roa nandihy ho mpivady ny fampisehoana nataon'i Irlandy, izay nitarika ny sivana tany Sina.
Ny fifanolanana tamin'ity taona ity dia mety ho avy amin'ny fidiran'i Islandy Hatari, miaraka amin'ny akanjony vita amin'ny hoditra, spikes ary PVC novolavolain'ny BDSM - ary ny filazan'izy ireo fa "mila moka daholo ny fihetsika rehetra".
Nilaza ny fitsipiky ny Eurovision fa tsy tokony hatao amin'ny fomba politika ny hetsika mandritra ny fampisehoana ataon'izy ireo, fa Tel Aviv kosa dia mpampiantrano mampiady hevitra noho ny fifanolanana israeliana-palestiniana.
Ny toerana dia nanosika ny antso mba hanaovana ankivy ny mpikatroka mafana fo-palestiniana izay maniry orinasa sy mpanao fampisehoana ary governemanta hihataka amin'i Israel. Tsy dia nisy rivo-piainana ankivy tao an-tanàna izay tsy natory alina akory.
Ilay superstar pop Madonna dia niaro ny fanapaha-keviny handray anjara amin'ny Eurovision Song Contest any Israel amin'ity herinandro ity, tamin'ny filazany fa hiteny foana izy hiaro ny zon'olombelona ary manantena ny hahita “làlana vaovao mankany amin'ny fandriampahalemana”.
Madonna 60 taona dia hiseho amin'ny vahiny amin'ny sabotsy mandritra ny lalao famaranana Eurovision any Tel Aviv.
Ny fifaninanana Eurovision malaza dia misy mpitendry zavamaneno avy amin'ny firenena 40 mahery ary mpijery 189 tapitrisa teo ho eo no nijery tamin'ny taon-dasa tamin'ny firenena 50 tany Eropa.
Misy firenena 41 mandray anjara
Firenena 41 handray anjara amin'ny Eurovision Song Contest 2019: